I-Curved Shaped Curve (UkuSasazwa ngokuqhelekileyo) Inkcazo
Yiyiphi iCleve Curve echaza kwiMathematika neNzululwazi
Ikota yebell curve isetyenziselwa ukuchaza ingcamango yeemathematika ebizwa ngokuba yi-distribution evamile, ngamanye amaxesha kuthiwa yi-Gaussian distribution. 'I-curve yeBell' ibhekisela kwisimo esakhiweyo xa umgca ucwangciswa usebenzisa amaphuzu eenkcukacha zento ehambelana nemigangatho 'yokusabalalisa ngokuqhelekileyo'. Iziko liqule inani elikhulu kunazo zonke kwaye ngoko liza kuba liphezulu kwi-arc yomgca.
Le ngongoma ibhekiselwa kwintetho, kodwa ngokwemigangatho elula, yona manani aphezulu okubonakalayo kwento (ngokwemigqaliselo yemeko, imo).
Into ebalulekileyo ukuba uqaphele ngokusasazwa ngokuqhelekileyo i-curve igxininiswe kwiziko kwaye iyancipha kwicala ngalinye. Oku kuphawulekayo kukuba idatha ingaphantsi kobutyebi bokuvelisa ixabiso elingaqhelekanga, elibizwa ngokuba yi-outliers, xa kuthelekiswa nezinye izibonelelo. Kwakhona, i-curve yebell ibonisa ukuba idatha idinganiswa kwaye ngaloo ndlela sinokudala ukulindela okunokwenzeka ukuba isiphumo siza kubakho kwinqanaba elingakwesobunxele okanye ilungelo leziko, xa sinokulinganisa inani lokuphambuka equkethwe idatha. Ezi zilinganiselwe ngokwemilinganiselo efanelekileyo. I-bell curve igrafu incike kwizinto ezimbini: ithetha kunye nokuphambuka okuqhelekileyo. Intetho ityhila indawo yeziko kunye nokuphambuka okuqhelekileyo kugqiba ubude nobubanzi bentsimbi.
Ngokomzekelo, ukuphambuka kwezinga elidala kudala intsimbi efutshane kwaye ibanzi ngelixa ukuchithwa okuncinane kwendlela edala ijika elide nelincinci.
Kwaziwa nangokuthi: Ukusabalalisa okuqhelekileyo, ukusasazwa kweGaussia
I-Curve Probable and Standard Deviation
Ukuqonda izinto ezinokwenzeka zokusasazwa okuqhelekileyo kufuneka uqonde le "mithetho" elandelayo:
1. Indawo epheleleyo phantsi kwekhalo ilingana no-1 (100%)
2. Malunga ne-68% yendawo engaphantsi kwekhalo liwela ngaphakathi kwe-1 ukuphambuka okuqhelekileyo.
3. Phantse i-95% yendawo engaphantsi kwekhalo iwela ngaphantsi kwe-2 imilinganiselo emiselweyo.
4 Phantse i-99.7% yendawo engaphantsi kwekhalo iwela ngaphakathi kwemilinganiselo emithathu.
Izinto ezi-2,3 kunye ne-4 zibizwa ngezinye izihlandlo ngokuthi 'umthetho olawulayo' okanye ulawulo lwama-68-95-99.7. Ngokwenokwenzeka, xa sinqume ukuba idatha isasazwa ngokuqhelekileyo ( bell curved ) kwaye sibala ukuba kukho ukuphambuka okuqhelekileyo , sikwazi ukucacisa ukuba kunokwenzeka ukuba enye ingcaciso yedata iya kuwela phantsi kwimiba enokwenzeka.
Umzekelo weCell Curve
Umzekelo omhle wendlela yebell okanye ukusabalalisa ngokuqhelekileyo ngumqulu weedayisi ezimbini . Ukusabalalisa kubandakanyeke malunga nenani le-7 kwaye amathuba okuhla xa usuka kude.
Nantsi i-% nethuba leziphumo ezahlukahlukeneyo xa uqhuba idayisi ezimbini.
5 - 11.11% 11- 5.56%
Ukusasazeka okuqhelekileyo kunamapropati amaninzi afanelekileyo, ngoko ke kwiimeko ezininzi, ngakumbi kwi- physics nakwi- astronomy , ukuhlukahluka okungahleliyo kunye nokusabalalisa okungaqhelekanga kuthathwa njengesiqhelo ukuvumela ukubala ukuba kunokwenzeka.
Nangona oku kunokuba yinto eyingozi, ngokuqhelekileyo ukulingana okulungileyo ngenxa yesiphumo esimangalisayo esibizwa ngokuba ngumyinge ophakathi. Le ngqungquthela ibonisa ukuba ithetha nayiphi na isethi yezinto ezahlukileyo kunye naluphi na ukusabalalisa okunentsingiselo yokugqibela kunye nokwahlukana kubangela ukuhanjiswa okuqhelekileyo. Iziganeko ezininzi eziqhelekileyo ezifana neziphumo zokuvavanya, ukuphakama, njl, landela ukusabalalisa ngokuqhelekileyo, kunye namalungu ambalwa kwiindawo eziphakamileyo eziphantsi kunye ezininzi phakathi.
Xa akufanele usebenzise iCleve Curve
Kukho iintlobo zeedatha ezingalandeli umzekelo wokusabalalisa oqhelekileyo. Ezi setethi zeedatha akufanele zinyanzeliswe ukuba zizame ukulungelelanisa intambo yebell. Umzekelo weklasi uza kuba ngamabanga omfundi, aqhelekileyo aneendlela ezimbini. Ezinye iintlobo zedata ezingalandeli ijika zibandakanya ingeniso, ukukhula koluntu, kunye nokungaphumeleli kwemishini.
Idatha yokuQinisekisa Inkcazo kunye nemizekelo
Malunga neAura yakho
Ngaba u-Mussolini Ufumana izithuthi ezihamba ngexesha?
Izipho ezingcono kakhulu onokuzithengela umama kwiBhajethi yeBafundi
Imfazwe yaseBurgundi: iMfazwe yaseNancy
I-Black Panther Party
Iziphumo zeEclipse kwiiplanethi zaseNatali
Amagama angama-R & B Abaculi
Inkqubo yeTSA yobhalisiweyo
UThixokazi ophilayo weNepal
Iimolyuli ezili-10 ezinegama eliMnandi okanye elinguMatyala
Iimbali ze-Christian Rock ezisemqoka zama-1990
Imidlalo yeSikhism Iipuzzle kunye neMisebenzi yezibonelelo
Ziziphi iimpawu zobume bobudlelwane phakathi kwabantu abaninzi